Resaka madiodio momba ny vinavinan'ny indostrian'ny fonosana malefaka any Shina
Na dia niditra tao Shina aza ny fonosana malefaka tamin'ny taona 1970, dia mbola tsy nampiasain'ny mpanjifa sinoa sy indostria mifandraika amin'izany. Saingy any Eropa, ny famonosana ranon-javatra mora vidy dia nanjary malaza be. Fitsarana manokana, mety misy ifandraisany amin'ny kolontsaina sy ny fahazarana misaina amin'ny o ...
Inona no atao hoe cubitainer
LDPE cubitainer dia goba plastika semi-hentitra, na tatavia, izay mikitoantoana nefa malefaka ary mora raisina. Cubitainer dia mateza ka azo ampiasaina irery fa azo ampiasaina amin'ny baoritra ivelany mihombo koa mba hamoronana fonosana matanjaka sy saika tsy simba. Izy io dia manana famaranana vozona misy kofehy ka ...
Kitapo fonosana rano fitoeran'ny mpanadio savony
Ny cubitainer LDPE sy ny kitapo mitsangana dia malaza amin'ny famenoana ny fanadiovana savony. Ny fonosana kitapo misy rano ho an'ny mpanadio savony dia mahafeno ny fepetra takian'ny FDA sy ireo akora rehetra izay mahatonga azy ireo ho safidy tsara amin'ny fitehirizana rano sy ny fahafaha-manao maro hafa. Ny kaontenera sy boaty dia als ...
LDPE cubitainer 5 litatra misy spout ho an'ny gel ultrasound ara-pitsaboana
Ny cubitainers LDPE anay dia malaza amin'ny famenoana gel fitarafana ara-pahasalamana. Matetika ny mpanjifa dia misafidy spout hamoaka ny gel. Ny cubitainer LDPE miaraka amin'ny spout ho an'ny gel ultrasound ara-pahasalamana dia mahafeno ny fepetra takian'ny FDA sy ireo akora rehetra izay mahatonga azy ireo ho safidy tsara amin'ny fitehirizana rano a ...
Kitapo fonosana ho an'ny otrikaretina asidra hypochlorous
avy amin'ny admin tamin'ny 20-09-06
Voataonan'ny COVID-19, misy ny fitomboan'ny fangatahana vokatra azo avy amin'ny bakteria toy ny otrikaina sy alikaola. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020 dia miasa mandritra ny 24 ora isan'andro ny masininay ho an'ny tsenan'ny otrikaretina asidra hypochlorous sy ny alikaola. Mandefa kitapo maherin'ny 100000 amin'ny t ...
Ity no vokarinay vaovao misy famolavolana kinova vaovao. Ny kitapo dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety miova arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) dia elastika ...
Mihabetsaka ny mpanjifanay manomboka mampiasa che cheseer hamenoana vokatra ranoka. Avy eo, inona ny che cheseur? Izy io dia fitoeran-javatra fonosana vaovao izay manambatra ny fahafaha-mihetsika ao anaty kitapo ary ny tombony azo avy amin'ny vokatra fonosana henjana na semi-henjana, izay mahatonga ny cheeratainer ho tonga lafatra ...